काठमाडौं । बाजुराको बूढीनन्दा नगरपालिका–९ गाउँपानीमा छाउगोठमा आगलागी हुँदा तीन जनाको जलेर मृत्यु भएको छ । काँसी बोहोराको घरनजिकैको छाउगोठमा बालिएको आगो निभाउन बिर्संदा उनकी श्रीमतीसहित दुई जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । मृत्यु हुनेमा काँसीकी श्रीमती ३५ वर्षीया अम्बा बोहरा, उनका छोरा १२ वर्षीय सुरेश र ९ वर्षीय रमित बोहरा...
काठमाडौं । जबरजस्ती करणीको आरोपमा ईलाका प्रहरी कार्यालय ईटहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीका अनुसार ईहटरी उपमहानगरपालिका–१० का २३ बर्षीय रमेश राईलाई पक्राउ गरिएको हो । प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार राईले फेसबुकमार्फत चिनजान भएकी भोजपुर पावादुम्बाकी एक ३५ बर्षीया महिलालाई जागिर लगाई दिन्छु...
काठमाडौं । काठमाडौंँ उपत्यकामा सञ्चालित रात्रिकालीन मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत एक महिला श्रमिकले प्रतिदिन १७ जना ग्राहकसँग शारीरिक सम्वन्ध राख्ने गरेको पाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्वर–३२ कोटेश्वर क्षेत्रमा सञ्चालित होटल, गेष्टहाउस, डान्स, दोहोरी, क्याविन र खाजाघरमा कार्यरत श्रमिक महिलाका बारेमा गरिएको अध्ययनले यस्तो...
बैतडी । बैतडी र दार्चुलामा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ । भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको खेला केन्द्रबिन्दु भएर गएराति गएको भूकम्पको धक्का बैतडी र दार्चुलामासमेत महसुस गरिएको हो । भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका प्रमुख दिपक बस्नेतले गएराति १० बजेर १ मिनेटमा ४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको बताए । भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको विवरण भने...
रामेछाप । ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने सरकारी नारालाई रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले सार्थक तुल्याउन एउटा अभियान सुरु गरेका छन् । प्रजिअ शर्माले नागरिकहरुलाई सेवा दिन घरदैलोमा पुगेर जिल्लावासीको मन जितिरहेका छन् । घण्टौ घाएर सदरमुकाम मन्थली आउनु पर्ने बाँध्यता हटाएर एकीकृत घुम्ती नागरिकता शिविर मार्फत...
काठमाडौं । कर्मचारी समायोजनका लागि २६ हजार १३० जना कर्मचारी अनलाइन प्रणालीमा नाम दर्ता गराएका छन् । यही पुस ११ गतेदेखि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारले सञ्चालन गरेको अनलाइन फारममा २६ हजार १३० जनाले नाम दर्ता गराएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले जनाएको छ । तीमध्ये १९ हजार ८६८ जना समायोजन रोज्नका लागि तयार र...
काठमाडौं । मकवानपुर राक्सिराङ गाँउपालिका–७ की गंगामाया चेपाङले १३ वर्ष नपुग्दै बच्चा जन्माएकी छन् । बुधबार दिउसो ३ः१५ बजे काठमाडौं, थापाथलीस्थित प्रसुती गृहमा गंगामायाले शल्यक्रियामार्फत २ केजी ९ सय ग्राम वजनको शिशु जन्माएकी हुन् । आमा र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ । सानो उमेर र शारीरिक...
काठमाडौं । आज राष्ट्रिय नेपाली टोपी दिवस मनाइँदैछ । नेपाली टोपीको प्रवद्र्धन गर्ने उदेश्यले केही बर्षअघि उत्साही युवाहरुले अंग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिन पारेर यो दिवस मनाउन सुरु गरेका थिए । पछिल्लो समय राष्ट्रिय टोपी दिवसले राष्ट्रिय स्वरुप ग्रहण गर्न थालेको छ । दिवसका अवसरमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा ढाका टोपीमा सजिएकाहरुले...
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा तपाइँलाई आकर्षक उपहार परेको सूचना त आएको छैन ? त्यस्तो सूचना वा जानकारीको प्रलोभनमा परेर तपाइँले त्यस्तो सूचना पठाउने व्यक्तिसँग सम्पर्क त गर्नुभएको छैन ? यदि त्यस्तो गर्नुभएको छ भने तपाइँ ठगिन पनि सक्नुहुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा ‘उपहार परेको’, ‘महत्वपूर्ण पार्सल आएको’ भन्दै सूचना पठाएर ठगी गर्ने...
जन्मदिन मनाउन परिवार पोखरामा छाडेर पारस एक्लै चितवनतिर
काठमाडौं । आफ्नो अधिकांस जन्मदिन छोराछोरीसंगै मनाउने गर्नुभएका पारसले यो वर्ष अरु साथीहरूसँग मनाउने हुनुभएकोे छ । शनिवारै चितवन आउनुभएका पारसका साथमा राजेश सिह, सितल सिह लगायत आफ्ना नजिकका साथीहरू सहभागि भएका छन् । पारस आज पुस १५ गतेदेखि ४९ वर्ष लाग्दै हुनुहुन्छ । पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रले भने छोराको जन्मदिन पोखरामा मनाउने अपेक्षा...
स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको स्मरणः वीरेन्द्र प्रजातन्त्रप्रेमी र सच्चा देशभक्त थिए
काठमाडौं । तत्कालीन राजा स्व. वीरेन्द्र शाहको ७४औं जन्मजयन्तीको अवसरमा शनिबार उनलाई स्मरण गरियो । स्व. राजाले आफ्नो कार्यकालमा नेपाल र नेपालीलाई पुर्‍याएको योगदानलाई कदर गर्दै ललितपुरको जाउलाखेलमा योगी नरहरिनाथ ट्रष्ट आध्यात्मिक परिषदले उनको शालिकमा माल्यार्पण तथा श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । कार्यक्रममा योगी...
‘लिटिल बुद्व’ बम्जनको तपस्यास्थलबाट हराएकाहरुको खोजी हुँदै
काठमाडौं । ‘लिटिल बुद्व’ भनेर प्रचार गरिएका रामबहादुर बम्जनको तपस्यास्थलबाट हराएकाहरुको खोजी प्रहरीले तीब्र पारेको छ । उनीहरु बेपत्ता भएको भन्दै परिवारका सदस्यले उजुरी दिएपछि प्रहरीको सक्रियता बढेको हो । हराएकाहरुबारे परिवारसँग विस्तृत रुपमा बुझ्ने र बम्जनको तपस्यास्थलबारे तथ्यांक लिने काम भइरहेको प्रहरी उपरिक्षक �...
‘हाछेथु भन्छन्ः ‘सपना पनि सिठ्ठी फुकेको देख्छु’
काठमाडौं । जहाँ जाम त्यहाँ सीताराम’ भन्ने भनाइ एकादेशको कथाजस्तै भइसकेको छ। तर, नेपाल प्रहरीभित्र रहेर उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थानमा नाम कमाएका प्रहरी निरीक्षक सीताराम हाछेथु पूर्वप्रहरी भइसकेका छन् । नेपाल प्रहरीका ‘रियल हिरो’का रूपमा चिनिएका हाछेथुले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्ष सेवा गरेर हालै अवकाश पाएका हुन् । नेपाल �...
मनाङको तापक्रम माईनसमा, नेपालगञ्जमा हुस्सुले हैरान
काठमाडौं । बाँकेमा आजदेखि जाडो बढेकोे छ । बाक्लो हुस्सुसँगै चलेको शितलहरका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ । दुई दिनयता तापक्रम विस्तारै घट्दै गएको छ । हावापानी फिल्ड कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख एपी चौरसियाका अनुसार बाँकेमा आजको न्यूनतम तापक्रम ६ डिग्री सेल्सियस छ । बिहानैदेखि शुरु भएको शीतलहर र हुस्सुका कारण यहाँबाट बिहानीपख हुने हवाई...
रात्रिबसमा मुस्कानसहितका परिचारिका
म्याग्दी । रात्रिबसमा महिला कर्मचारीले चिया–कफी र पानी सोध्छिन् । ल्याइदिन्छिन् । यात्रा बसकै हो ! बेनी–काठमाडौं बसमा दुइटी साहसिला र स्वावलम्बी परिचारिका छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५, पाउद्वार घर भई राजधानीको त्रिचन्द्र कलेजमा बीएस्सी दोस्रो बर्षकी छात्रा कुसुम राना र बेनीको माउन्ट एभरेष्ट माविबाट १२ कक्षा उत्तीर्ण...